परिवारले आफ्नो प्रेम अस्विकार गरेपछी प्रेमी र प्रेमिकाले बनाए कल्पनै गर्न नसकिने योजना ! - माडी खबर
परिवारले आफ्नो प्रेम अस्विकार गरेपछी प्रेमी र प्रेमिकाले बनाए कल्पनै गर्न नसकिने योजना !
माडी खबर calendar_today ६ भाद्र २०७८, 3:18 am
काठमाडाैं । परिवारका सदस्यहरु उनीहरुको प्रेम स्वी का र गर्न मानेनन् । अभिभावकले विवाह गर्न नदिएपछि प्रेमी र प्रेमिकाले यस्तो योजना बनाए जसका कारण प्रेमीका अस्पताल पुग्नु परेको छ । प्रेमिकाले आफैले अनुहारमा ए सि ड हा न्न लगाइन् । आफ्नो अनुहारमा क्ष ती भएपछि परिवारका सदस्यले प्रेमीसंग विवाह गराइदिन्छन् भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो । यो घ ट ना भारत बिहारको नालंदा जिल्लाको हो।
नालंदाको लाहेरी पुलिस स्टेशन क्षेत्रको सर्किट हाउस नजिकै दिउँसोमै युवती माथि यस्तो घ ट ना भएको खबर सार्वजनिक भयो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा युवतीको प्रेमी सहित ५ जना प क्रा उ परे । त्यसपछि घ ट ना को रहस्य खुलेको हो ।
सदरका डीएसपी डा शिब्ली नोमानीले ती युवतीको साजन कुमार नामक एक युवकसँग पछिल्लो ७ बर्षदेखि प्रेम रहेको बताए। युवतीका परिवारका सदस्यहरु विवाह गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यस कारण युवती उनको प्रेमी मिलेर यस्तो योजना बनाएका थिए । युवतीमा नै कमजोरी भएपछि आमाबुवा विवाह गरिदिन राजि हुन्छन् भन्ने उनीहरुलाई लागेको थियो । सीसीटीभी क्यामेरामा उनीहरुको यो सबै घ ट ना रेकर्ड भएको थियो । जसमा देखिन्छ की दुई युवती कतै पहाडतिरको वाटोमा जाँदैछन् । त्यहीवेला अर्को तर्फवाट दुई युवक आउँछन् र जगमा भएको ए सि ड युवती तर्फ फ्याक्छन् ।
दुबै यसअघि २०१७ मा पनि उनीहरुले परिवारको मन्जुरीबीना संगै बस्न थालेका थिए । तर परिवारले युवतीलाई युवकसंग बस्न दिएनन् र फर्काएर ल्याए । परिवारले जति गरेपनि विवाह गर्न नदिएपछि उनीहरुले यस्तो असफल योजना बनाएका थिए ।
गर्भ राख्ने औषधि सेवन गर्दा एकैचोटी जन्मिए ७ बच्चा
वर्षा र बाढीले २३ जनाको मृत्यु